WAR DEG DEG AH: Dagaal Khasaare geystay oo markale maanta ka qarxay qeybo kamid ah Somaliland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR DEG DEG AH: Dagaal Khasaare geystay oo markale maanta ka qarxay...
WAR DEG DEG AH: Dagaal Khasaare geystay oo markale maanta ka qarxay qeybo kamid ah Somaliland
Sanaag (Halqaran.com) – Warar goor-dhow naga soo gaaray deegaanada Ceel-Afweyn ayaa sheegay in uu maanta uu markale dagaal ka qarxay degmada Ceel-Afweyn ee Gobolka Sanaag.
Dagaalkan ayaa waxa uu dib uga dhex qarxay labo beelood oo muddooyinkii u dambeeyay isku dagaalsanaa deegaanada degmada Ceel-Afweyn, kuwaasi oo colaadooda mudooyinkii u dambeeyay soo cusboonatay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya, in dagaalkan ilaa hadda ay ku geeriyooden labo qof, halka afar kalena ay ku dhaawacmeen, inkastoo si dhaba loo ogeyn baaxada khasaaraha ka dhashay dagaalkan oo hadda lagu soo waramayo inoo socdo.
Ciidamada Booliska Somaliland iyo Maamulka Gobolka Sanaag ayaa sidoo kale waxa lagu soo waramayaa inay ku howl-yahiin sidii loo damin lahaa xiisadan dagaal ee dib uga dhex qaraxday labada beel ee wada dagan degmada Ceel-Afweyn.
Xafiiska Halqaran.com, Sanaag
beelo walaalo ah